Labo Go’aan Ayaa Farmaajo Horyaal..Mid Saddexaad Ma jiro | Xaqiiqonews
Labo Go’aan Ayaa Farmaajo Horyaal..Mid Saddexaad Ma jiro
Marka la fiiriyo damaca Kenya, faragelinta Mareykanka, wada hadalada Muqdisho ee ku yimid cadaadiska diblomaasiyadeed, doorashooyinka dalka ee la filaayo , iyada oo intaasi oo dhan ay jiraan, su’aasha ugu muhiimsan waxa ay tahay Xagee ku dambeyn karaa Mustaqbalka Farmaajo?
1-Ku Fikir Dib u Doorasho,iyada oo aan dib lagu soo dooran doonin.
Hadii la iga dalbado in aan sheego labo arin oo Faraamjo uusan iska badbaadin karin , waxaan dhihi lahaa mid waa in uu “dhiman doono” marka cimrigiisa dhamaado, tan kale waa in uusan soo laaban doonin marka uu xilkiisa dhamaado, ii dul qaado, caddeyn ayaan ku siinayaa, xitaa aniga oo meel kalin kula aadin, kaliya shirka ka socda Muqdisho.
Farmaajo, olalahiisa ugu weyn waxa uu ahaa “waddanka waxa aan ka xoreynaa go’aanka shisheeyaha”, Laakiin afar sano ka dib waxa aan arkeynaa cadaadiskii caalamka oo ah mid “Wali nool”, Farmaajo waa in uu fahmaa in aan “xasuus leenahay”.
Sidoo Kale Aqri..Yaa Badalaya Xasan Cali Kheyre?
Dhinaca kale aan ka fiirino Shirka Muqdisho waxa uu ku fumay labo arin oo isbaheystay “sharuuddda Axmed Madoobe iyo Tanaasulka Farmaajo”, waxaa la is weydiin karaa Farmaajo muxuu ku doortay dhanka fudud ee “tanaasulka”. Wey iska muuqataa Farmaajo waxa uu xeerinayaa riyadiisa siyaasadeed ee ah “dib u doorashadiisa”.
Hadii Farmaajo dadaalkiisa oo dhan uu iskugu geeyo hal shay oo ah “dib ii doorto” , -sida uu hadda sameynaayo- waan hubaa waxa uu ku weyn doonaa labaduba dib u doorashadiisa iyo qiimahiisaba, waana isla arintii ku dhacday labadii madaxweyne ee isaga ka horeysay Xasan shiikh iyo Shiikh Shariif.
2- Go’aanka Saxda ah
Go’aankani waxaa qaatay Kheyre, waana go’aanka ugu qaraar- marka loo fiiriyo dadka xilka haaya- laakiin waa go’aanka ugu qiimaha wanaagsan, hadii Farmaajo uu cadaadis kala kulmaayo beesha caalamka, halkan waddo ayuu isku bari yeeli karaa, waa in uu “xakunka iskaga tagaa”.
Gabagabadii Farmaajo waxa uu wajahayaa cadaadis uga imaanaya “waqtiga ciyaarta”, mudane madaxweyne ceeb ma ahan in aad fashilanto balse waa ceeb in aad diido fashilka, ogow labo waxyaabod hadii ay isku kaa raacan marnaba ma guuleysaneysid, fashil iyo in aad diido fashilka.